यस्तो दाग देखिए बोक्सिले चुसेको भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ ? यस्ता हुनसक्छन् कारणहरु - Nepali in Australia
June 26, 2021 autherLeaveaComment on यस्तो दाग देखिए बोक्सिले चुसेको भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ ? यस्ता हुनसक्छन् कारणहरु
कहिलेकाहिँ विहान उठ्दा तपाईंको शरीरमा निलो दाग-धब्बा देखिन्छ ? यस्तो दागदब्बालाई हाम्रो नेपाली समाजमा बोक्सीले चुसेको (टोकेको) भन्ने गरिन्छ। खासगरेर महिलाको खुट्टा र पाखुरामा यस्तो दाग देखियो भने बोक्सीले चुसेको भन्ने गरिन्छ। तर, यसमा कुनै सत्यता हुँदैन।यदि तपाईंको शरीरमा पनि निलो दाग र धब्बा देखिन्छ भने सावधान भइहाल्नुहोस्। किनकि शरीरमा आउने कुनै पनि परिवर्तनले तपाईंको नराम्रो स्वास्थ्य अवस्थालाई संकेत गरिरहेको हुन्छ।